March 2016 ~ Htet Aung Kyaw
(Agree on disagree)
မြန်မာအများစုနဲ့ မတူတဲ့အမြင်ကုိုတွေ့မိလုို့...... http://asia.nikkei.com/ ကနေ မှတ်တမ်းအဖြစ် ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။
March 29, 2016 10:00 am JST
A strong or simply authoritarian leader? National League for Democracy leader Aung San Suu Kyi waves to supporters in Yangon during her election campaign in October 2015​. (Photo by Steve Tickner)
Over the past few years, there has beenasignificant shift in public perceptions of Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi. While still lauded by many asachampion of democracy, she is increasingly being accused of arrogance and inflexibility. Since the sweeping electoral victory of her National League for Democracy last November, some observers have even suggested that she could replace one authoritarian regime with another.
Suu Kyi has always had her critics. She has been described as imperious, if not autocratic, and accused of refusing to listen to contrary advice. She has been uncomfortable with internal party debate. Disgruntled NLD members claim that she has denied others in the democracy movement opportunities to influence its membership and direction. They say she has resisted groomingasuccessor and blocked others with leadership ambitions.
Since being released from house arrest in 2010, she has revealed other personality traits that do not accord with her public image. She seems to have lost sight of goals such as universal human rights, which she espoused asaprisoner of conscience, and stands accused of putting the pursuit of power above principles. For example, she has declined to speak out against the abuse of Myanmar's Rohingya community and, in the national elections, the NLD refused to field any Muslim candidates.
National League for Democracy leader Aung San Suu Kyi andasenior party figure U Tin Oo attendarally in Yangon prior to voting in November. (Photo by Steve Tickner)
During the polls, Suu Kyi effectively reduced all other NLD candidates to proxies by restricting their roles and activities. She reserved the right to make major policy announcements herself. Although denied the presidency by the 2008 constitution (because her two sons are British citizens), she has stated that she intends to be "above the president," who would "have no authority." She planned to "run the government" herself and to "make all decisions."
It is always risky to speculate about the mindsets of public figures. Also, not all reports coming out of Myanmar and claiming to represent Suu Kyi's views can be relied upon. It is possible that, as her detractors claim, she has always had an authoritarian streak that is now revealing itself. However, without trying to justify any of her actions, it is worth considering -- particularly as she prepares to take control of government from April 1 -- whether there might be objective reasons for her to adoptastrong personal leadership style.
Several possible factors spring to mind. First, after 1988, while the world elevated Suu Kyi to the position of democratic icon, sang her praises, awarded her prestigious prizes and granted her honorary degrees, "The Lady" (as she became known) always saw herself asapolitician. She was happy to accept her international status -- indeed, she shrewdly exploited it -- but her sights were set firmly on the goals of her own freedom and, ultimately, those of her compatriots.
Second, she has always believed that she hasaspecial role to play in Myanmar's history. She told her husband when they married in 1971 that, if forced to choose, her country would come before her family. In 1988, she made that decision. As the daughter of Myanmar's independence hero, General Aung San, she feelsadeep sense of personal destiny that has helped her overcome enormous difficulties in her quest to become the country's president.
Third, over the past 25 years, Suu Kyi has been feted by presidents and prime ministers, and invited to address world assemblies. She has essentially dictated the policies of major powers and international organizations toward Myanmar. Both at home and abroad she has been surrounded by crowds of admirers. In such circumstances, it would be easy for her to believe that she hadaunique role to play in Myanmar's national development.
Fourth, Suu Kyi knows that, ever since Myanmar regained its independence in 1948, its governments and political parties have been weakened by factionalism, personality clashes and policy disputes. The armed forces (or Tatmadaw) were able to preside over the modern world's most durable military dictatorship largely because they had strong leadership andashared ideology, and exercised tight discipline through an effective organizational structure.
Fifth, another reason why the armed forces remained in power in Myanmar for so long was that they placedapremium on loyalty and institutional cohesion, even at the expense of expertise and other qualities. When he ruled Myanmar, for example, Ne Win reversed an old saying to emphasize "a good man first,asmart man second" -- good in that case being someone who would never question the Tatmadaw's ethos or challenge its leaders.
Sixth, Myanmar isavolatile mix of ethnic, religious, political, economic and social groupings. These groupings compete with each other, and most are riven by factions and personality clashes. There are also dozens of non-state armed groups. The potential for public protests, sectarian violence and civil war is high. This is why the Tatmadaw claims that onlyastrong central government and firm controls can guarantee Myanmar's unity, stability and sovereignty.
Seventh, Suu Kyi knows that the success -- possibly even the survival -- of her government will depend onamodus vivendi with the armed forces. This has already required major concessions on the part of the NLD. Having negotiated an agreement with the generals, she cannot afford to have them doubt her ability to implement it and to keep control over her party members, many of whom resent the Tatmadaw's continuing role in national politics.
There seems little doubt that factors like these have influenced the way in which Suu Kyi thinks about the business of government and views her own role, now that she is finally inaposition to exercise real power.
Also, she has changed over the years. She is no longer the reserved wife ofaBritish academic who stood nervously on the Shwedagon Pagoda platform in 1988 and called for an end to military rule in Myanmar. Foraquarter ofacentury she has endured physical threats, psychological torture and public abuse to emerge asatough, experienced political warrior onamission to change her country. She is alsoaglobal figure of considerable stature.
Suu Kyi's strong leadership style may simply beareflection of her character, as her critics are claiming. However, it could also be, at least in part,acalculated strategy to help cope with the harsh realities of power in Myanmar and the enormous challenges faced by the new government. She could view such an approach as the best way of keeping the Tatmadaw's support, binding her fractious party together, managingahost of contentious issues and delivering the results that are expected.
Whatever the factors influencing her personality and behavior, Suu Kyi is determined to playadominant role. She rightly claimsapopular mandate to do so. To most voters in 2015, she personified the NLD and the need for far-reaching reforms. Her insistence on negotiating with the generals herself, taking major policy decisions, vetting party appointments, anointingaloyal follower as president and giving herself four out of 21 cabinet positions all suggest suchaplan.
Given Myanmar's deeply troubled past and highly uncertain future,astrong hand on the tiller might be what the country needs right now. However, there are real risks in taking such an approach. While she is still very popular, Suu Kyi's attitude and behavior are already causing concerns, including in the NLD. Many new members of parliament want to playagreater role in government than simply endorsing decisions made by their leader. Some foreign commentators have even labeled hera"democratic dictator" in the making, who may precipitate the very crises she is trying to avoid.
That may be stretching the point, but there would be serious consequences if Suu Kyi cannot keep her party, the armed forces and the Myanmar people in the boat as she leads them into uncharted waters.
Andrew Selth is adjunct associate professor at Griffith University and the Australian National University.
1:12 AM Htet Aung Kyaw No comments
လာမဲ့ တနင်္ဂနွေ၊ (ဧပြီလ ၃ ရက်) မှာ ကျင်းပမဲ့ Tour of Flanders အကြိမ် ၁၀၀ မြောက်အထူးပွဲမှာ ဘယ်သူအနုိုင်ရမလဲဆုိုတဲ့အပေါ် အားလုံးကစိတ် ၀င်စားနေကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း cobbled Classics (ကျော်တုံးခင်းလမ်း) ရဲ့ အဓိ ကပြိုင်ဖက်နှစ်ဦးဖြစ်သူ ဆွင်ဇလန်မှ Fabian Cancellara နဲ့ အိမ်ရှင် Tom Boonen တုို့နှစ်ဦးက မီဒီယာတွေက အလေးပေးဖေါ်ပြနေပါတယ်။
ဆွင်ဇလန်ချန်ပီယံနဲ့ ဘလဂျီချန်ပီယံတုို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဒီပွဲကို ၃ ကြိမ်စီ ပထမ ရထားဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၃။ ၂၀၁၄ တို့မှာ ကာစီးလာလား ပထမ ရဖူးပြီး ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၂ တုို့မှာ ဘွန်းကရထားဖူးပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် သူတုို့ ၂ ဦးကို ဒီပွဲရဲ့ မဟာပြိုင်ဖက်အဖြစ်တင်စားပြောဆုိုနေကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ မနှစ်က ပထမ ရထားသူ Alexander Kristoff (Nor) ဟာ ဒီနေ့ကျင်းပ နေတဲ့ De Panne ပွဲမှာခြေစွမ်းပြနေသူမုို့ လျော့တွက်လုို့မဖြစ်ပါ။ တခါ ပြိးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က Gent-Wevelgem ပွဲမှာ ကာစီးလာလားတုို့ကို တီးပြီး ပထမ ယူသွားသူ ကမ္ဘာချန်ပီယံ ပီတာဆာဂန်ကိုလည်း မေ့ထားလုို့မရပါ။
စာရေးသူကတော့ ဘက်လုိုက်မှုရှိတယ်ပဲဆုိုဆုို လူငယ်ခြေတက် ပီတာဆာဂန် ရလိမ့်မယ်လုို့ထင်ထားပါတယ်။
၂၅၅ ကီလုိုမီတာ (၆ နာရီကျော်-၇ နာရီနီးပါး) ရှည်လျားပြီး cobbled climbs ကျောက်တုံးခင်းလမ်း ကုန်း တက်တွေ၊ ကျဉ်းမြောင်းပြီး အကွေ့အကောက်များလှတဲ့ လမ်းတွေဟာ တကယ့်စိမ်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဒါအပြင် ဖေဖေါ်ဝါရီလနှောင်းပုိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ လမ်း တချို့လည်း ဒီပွဲမှာ ပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့တဆက်တည်း စာရေးသူ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့အကြောင်းရာတခုက တော့ ပီတာဆာဂန်ရဲ့ cobbled Classics (ကျော်တုံးခင်းလမ်း) အတွက် အ ထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဘီးပါ။ (ဗွီဒီယုိုမှာ ကြည့်နုိုင်ပါတယ်)။
ဒီဘီးကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ Gent-Wevelgem ပွဲမှာစီးခဲ့ပြီး အခု Tour of Flanders မှာလည်း ဒီဘီးကို ဆက်စီးမယ်လို့သိရပါတယ်။ သူဟာ အရပ် ၆ ပေ သို့မဟုတ် 182cm မြင့်တဲ့အတွက် 56cm Specialized frame နဲ့ စီးပါ တယ်။
ထုိုင်ခုံက Prologo Scratch2saddle ဖြစ်ပြီး ခြေနင်းက Look blade pedals ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအရောင်ကုို ချယ်ထားပါတယ်။ ဒါအပြင် သူရဲ့နုိုင်ငံ Slovakian flag ကိုလည်း ထည့်ထား ပါသေးတယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်က ဂီယာဟာ Shimano Dura Ace 11s group set ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဂီယာ 53x39 နဲ့ နောက်ဂီယာ 11x28 ဖြစ်ပါတယ်။ တခါ တာယာ ကုို ၂၈ လက်မသုံးထားတာကလည်း ထူးပါတယ်။ အများအားဖြင့် ၂၇ ခွဲဟာ ပုံမှန် စတန်းဒဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ...နှစ် ၁၀၀ မြောက် Tour of Flanders အထူးပွဲမှာ ဘယ်သူ ပထမ ရနုိုင် မလဲ။ တနင်္ဂနွေနေ့ (ဧပြီလ ၃ ရက်) မှာ အသေအချာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ။
ဘလဂျီယံနုိုင်ငံမှာ ဆက်တုိုက်ဆုိုသလုိုကျင်းပနေတဲ့ Spring Clasics ပွဲတွေ ထဲက ၃ ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ De Panne ပွဲ ဒုတိယနေ့မှာ Elia Viviani (Ita) Team Sky က 5:01:04 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step နဲ့ Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha တုို့က နှာတဖျားစီနောက်ကျပြီး ဒု-တ ရသွား ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပန်းဝင်အခင်းအကျင်းဟာ ဒုတိယ ရသွားသူ ဂျာမဏီက နာမည်ကြီး တာတုိုဘုရင် Kittel ပထမ ရဖုို့သေချာနေတဲ့ပွဲမျိုးပါ။ သူတုို့ရဲ့ Etixx - Quick-Step အသင်းကနေ ပွဲကိုကောင်းကောင်းထိမ်းထားနုိုင်ပြီး ပန်းဝင်ခါနီးမှ သူ့အသင်းဖေါ်တဦးက အသားကုန်ဆွဲပြီး သူကို တင်ပေးလုိုက် တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကီတဲလ် နည်းနည်းကုန်နေသလားမသိပါ။ နောက်ကနေ ပုန်းပြီး တက် ပြေးလာတဲ့ Viviani ပန်းဝင်စည်းပေါ် တလက်မလောက်စောပြီး ၀င်သွားနို်င်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေ့ တတိယ ရသူ ခရစ်စတော့ဟာ မနေ့က ပထမ ရထားသူဖြစ်တဲ့အတွက် ၂ ရက်ပေါင်း ပထမ ဆုကိုပါ ရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲဟာ မနေ့ကနည်း နဲနဲကွာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Breakaway နဲ့ ပန်းဝင်ခါ နီးမှ ထွက်ပြေးနုိုင်တဲ့အဖွဲ့ (ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ၊ သီးခြားအခေါ်အဝေါ်ရှိနုိုင်ပါ တယ်) ရဲ့ကွားခြားချက်လုို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ မနေ့ကပွဲဟာ အရင် တနင်္ဂနွေနေ့က ပီတာဆာဂန်တုို့ အနုိုင်ရသွားတဲ့ပွဲနဲ့အဆင်တူပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ကိလုို ၃၀ လောက်အလုို တောင်ကုန်းအတက်လေးမှာ ခရစ်စတော့ နဲ့အခြား ၃ ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားရာကနေ တဖြေးဖြေးအရှိန်တင်ရင်း နဲ့ တမီနစ်ကျော်ပြတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ၃ ဦးပါ ရှေ့ပြေးအုပ်စုကတော့ (TV မှာစပြချိန် ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၆၀ ကျော်အလို) ၃ မီနစ်ကျော်အထိ ပြတ်နေ ရာကနေ တဖြေးဖြေး Gap က ကျလာပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ၃ ဦးစလုံး တာဝန်ခွဲပြီး အလည့်ကျမဆွဲပဲနဲ့ တကုိုယ်တော်ထွက်ပြေး တာလည်း မှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ၁၅ ကိလုိုခန့် အလုိုမှာ ဖမ်းမီသွားပါတယ်။
အဲဒီ ၆၀ ကိလုိုလောက်အတွင်း ကြီးမားတဲ့လဲပြိုမှုတခုကိုလဲ တွေ့လုိုက်ရပါ သေးတယ်။ ပွဲကနေထွက်လုိုက်ရပေမဲ့ အရင်ပွဲလောက်တော့ ဒဏ်ရာမပြင်း ဘူးလုို့ထင်ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပုိုင်းအတွင်း စက်ဘီးသမား ၂ ဦး သေဆုံး ပြီးတဲ့နောက် စက်ဘီးသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် အားလုံးက စိုးရိမ်နေ ကြပါတယ်။
5 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:45
8 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step
10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:50 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ De Panne ကနေ De Panne အထိ (မြို့ပတ်) 111.5 km ကို မနက်ပုိုင်းမှာ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပြီး ညနေပုိုင်းမှာတော့ တဦးချင်း စံချိန်ပြု (ITT) 14.2 km ကုို ယှဉ်ပြိုင်ဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
ဒီပွဲပြီးရင်တော့ ပီတာဆာဂန်အပါဝင် ဆရာကြီးတွေ အကုန်ဝင်ကျဲမဲ့ Tour of Flanders 2016 ပွဲ တနင်္ဂနွေမှာကျင်းပဖုို့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို သီးခြား တင်ပေးပါ့မယ်။ ။
အောင်သူငြိမ်း| March 31, 2016 | Hits:22 (ဧရာဝတီ)။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်သည်ကို စောင့်ကြိုနေသော ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
Dividend ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကုမ္ပဏီတခုမှာ အစုရှယ်ယာဝင်ထားကြသူတွေက အမြတ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ မျှဝေခံစားမှု အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ဒီစကားလုံးကို နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ယူဆောင်လာပြီး ပြောဆိုသုံးစွဲကြပါတယ်။
မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ပြောဆိုသုံးစွဲလာကြတာက Peace dividend ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ အသီးအပွင့်တွေကို ဘယ်လိုခွဲဝေ၊ မျှဝေခံစားကြမလဲ ဆိုတာပါပဲ။
နိုင်ငံတကာမှာ သုတေသီတွေ၊ မူဝါဒချမှတ်သူတွေက စဉ်းစားကြပါတယ်။ အပစ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ကြတဲ့ အခါ ယခင် ရန်ဘက်ဖြစ်နေကြတဲ့ နှစ်ဖက်စစ်သားတွေ စစ်တိုက်စရာ မလိုကြတော့ပါဘူး။ သူပုန်ဘက်က စစ်သားတွေ လည်း စစ်ကြောင့် အသက်မသေဆုံးကြရတော့သလို၊ စစ်ကို ဆက်တိုက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အလားတူပဲ အစိုးရတပ်ဘက်က စစ်သားတွေလည်း သေကြေ၊ စစ်တိုက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နှစ်ဖက်မှာလည်း စစ်တိုက် ဖို့အတွက် သုံးစွဲနေကြရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ချွေတာမိလာပါတယ်။ ယခင်လို စစ်စရိတ် ကုန်ကျနေစရာ ဆက်လက် မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
စီးပွားရေးပညာသဘောအရ ‘လူ’ ကို အရင်းအနှီးတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယခင်စစ်တိုက်နေသူတွေ အားလပ်သွားကြတဲ့အခါ သူတို့ဟာ ကုန်ထုတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားစုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ စစ်စရိတ်တွေ မကုန်ကျတော့တဲ့အခါ ဒီငွေတွေကို စုဆောင်းဖို့၊ သို့မဟုတ် ကုန်ထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် ပြန်သုံးကြမယ်လို့ အနုမာန ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး တက်လာမယ်။ အကျိုးစီးပွားဖြစ်လာမယ်။ ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်း နှစ်ဖက်ပြည်သူ အကျိုးရှိစွာ ခံစားနိုင်ကြမယ် ယူဆလို့ Peace dividend ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်လာတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူပုန်အင်အားစု (အားလုံးပေါင်း ခန့်မှန်း) တသိန်းဝန်းကျင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ တပ်မတော်က ၅ သိန်းနီးပါး အင်အား ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ကတည်းက အပစ်ရပ်ခဲ့ကြပြီး နေရာတော်တော်များများမှာ တိုက်ပွဲသံတွေ တိတ်ခဲ့ပါတယ်။
တခါ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီး အပစ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်လာတာ၊ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲဖို့ သဘောတူညီချက် စာချုပ်တွေ ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အချို့ဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေသေးပေမယ့်၊ နေရာ အတော်များများမှာ တိုက်ပွဲသံတွေ တိတ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအသီးအပွင့် (Peace dividend) ကို ဘယ်လို ခံစား နိုင်ကြသလဲ ဆိုတာကတော့၊ သေချာ လေ့လာဖို့ ကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပါ။
ယခင် စစ်သားတွေက ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုတွေ ပြန်ဖြစ်လာပါသလား။ ယခင် စစ်ကုန်ကျစရိတ်တွေက ထုတ်လုပ်မှု အတွက် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဖြစ်လာပါသလား။ ဒီလိုအကျိုးအမြတ်တွေကို ဘယ်လိုခွဲဝေကြသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် လေ့လာနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့် (Democracy dividend) ဆိုတာ ရှိသလားလို့ ဆက်ပြီး စဉ်းစားမိပါတယ်။ မတ်လ ၃၀ ရက် နေ့မှာ အရပ်သားသမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အပြည့်အဝ မဟုတ်သော်လည်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပိုနီးလာသလို ခံစားကြရပါတယ်။
ယခင်အစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အစဉ်အလာတရပ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်မှာလည်း တချိန်က အတိုက်အခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပါတီနဲ့ ပင်နီရောင် လွှတ်တော်အမတ်တွေ လွှမ်းခဲ့ပါပြီ။
ပြည်သူတွေက တခဲနက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရလည်း (အစစ်အမှန်အာဏာ အပြည့်မရှိသေးလျှင်သော်မှ) ရုံးပြင်ကနား ရာထူးဌာနတွေ ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ၁၀၀% ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မရှိနိုင်သလို၊ ပိုပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ (Public Goods) အများပြည်သူ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိစ္စတရပ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာတွေ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အပြည့်အဝ ရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို လူတိုင်း ခံစားရယူ နိုင်ကြသလို၊ ဒီမိုကရေစီကို မည်သူ မခံစားစေရ ဆိုပြီး ခွဲခြားဖယ်ကျဉ် (discriminate) လုပ်ထားလို့လည်း မရပါဘူး။
ယခင်က ဒီမိုကရေစီအရေး ဖိနှိပ်ခဲ့သူတွေကိုတောင် ဒီမိုကရေစီ မခံစားစေရလို့ ပိတ်ပင်မထားနိုင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ နည်းနည်း ပွင့်လင်းမှုအခြေအနေမှ များများ ပွင့်လင်းမှုအခြေအနေသို့ ဆက်၍ လျှောက်ကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပွင့်လင်းမှုနဲ့အတူ အခြားအသီးအပွင့်များလည်း ရှိလာပါတယ်။
Democracy dividend (ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့် ခံစားခွင့်) ဆိုတာ ရှိပါသလား။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ကာလကြာရှည် လေ့လာနေသူ သြစတြေးလျက ရှောင်တာနဲလ် (Sean Turnell) ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က သူ့ဆောင်းပါး (Myanmar’s democracy dividend begins with an economic reboot) မှာ စီးပွားရေးဦးမော့မှုနဲ့ စတင်ရမယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ လူဆင်းရဲတွေ မခံစားခဲ့ရတဲ့ အခွင့်အရေး၊ ဆင်းရဲတွင်းကနေ လွတ်မြောက်စေရမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဆောင်းပါးတစောင်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နိုက်ဂျီးရီးယားဟာ ကာလကြာရှည် စစ်အာဏာရှင်တွေအောက် နေခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ကိစ္စ သူတို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ စာရေးသူ Tochukwu Ezukanma ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်တွေဆိုတာ လမ်းတွေဖောက်တာ၊ လမ်းတွေပြုပြင် ထိန်းသိမ်းတာ၊ စာသင်ခန်းအသစ်တွေနဲ့ မိခင်နဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ဆေးပေးခန်းတွေ တိုးချဲ့ဖွင့်လာတာလား… တက္ကသိုလ်အသစ်တွေ အုတ်မြစ်ချတာလားပေါ့… မေးခွန်း ထုတ်ပါတယ်။
ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် ‘ဒီမိုကရေစီ’ မလိုအပ်ပါဘူးလို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။ အာဏာရှင်အစိုးရတွေကလည်း ခုနလို ဖွံ့ဖြိုး ရေးကိစ္စတွေ လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့် စသည်ဖြင့် လူမှု၊ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး တွေ အတွက်လားပေါ့။ ပျော့ပျောင်းညင်သာတဲ့ အာဏာရှင် (Benevolent dictator) တွေကလည်း ဒီလိုကိစ္စကို ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ဆိုတာ ဒီထက်တော့ ပိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ဆိုတာ ပြည်သူ့ဘဝများကို အပြု သဘော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာစေဖို့၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲ (meaningful change) တွေ လိုအပ်ပါ တယ်။
ကမ္ဘာ့နေရာ အများအပြားမှာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတွေနဲ့ တရားဝင်မှုရှိတဲ့ စနစ်များက ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကို ပိုမို လွယ်ကူ သက်သာအောင် အခြေခံလိုအပ်ချက်နဲ့ လူမှုဖူလုံရေးတွေကို ပံ့ပိုးဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေကို ပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ်ဟာ ပို၍ တန်းဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ပို၍ တရားဝင်မှုရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေက ထောက်ကူ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပို၍ ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ဒီမိုကရေစီ သဘော တရားရေးရာ ပါမောက္ခဟန်တင်တန်က “ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအချင်းချင်း စစ်ပွဲတွေဖြစ်တာ မရှိခဲ့ဘူး” ဆိုပြီး သုံး သပ်ခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့် (Democracy dividend) ဆိုတာ အာဏာလားပေါ့။ ၁၈ ရာစု ဂျာမန် လူမှုသိပ္ပံပညာရှင် မက်ဝီဘာ (Max Weber) ကတော့ “အာဏာဆိုတာ သင်၏ အလိုဆန္ဒအတိုင်း အခြားသူများအပေါ် ပြုမူစေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အာဏာကိစ္စပါပဲ။ အဲသည်တော့ ဒီမိုကရေစီ အာဏာရေးဆိုတာ ရေပေါ်ဆီ (elite) လူနည်းစုက အာဏာ လွှမ်းမိုးမှု ပို၍ လျော့နည်းစေရမယ်၊ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် ပိုရှိစေရပါမယ်။ အာဏာဖြန့်ခွဲဝေမှုမှာလည်း ပိုလို့တန်း တူညီမျှမှု ရှိစေရမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
နိုက်ဂျီးရီးယားမှတော့ လူနည်းစု ထိပ်သီးတွေက လွှမ်းမိုးထားတုန်းပဲ ဆိုပြီး စာရေးသူ Tochukwu Ezukanma က ဆိုပါ တယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်အနေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးလာစေမှုနဲ့အတူ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဝန်းကျင် လည်း တိုးတက်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူထုတွေ ခွန်အား အာဏာမြင့်မားလာစေဖို့နဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တင်ကူး လိုအပ်ချက်တွေ အဖြစ်နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ သဟဇာတဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုတွေ ရှိလာစေဖို့လည်း လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
တချိန်က အချို့သောသူတွေက ဒီမိုကရေစီအတွက် ဆယ်စုနှစ်များစွာ လှုပ်ရှားမှုများမှာ အနစ်နာခံ လှုပ်ရှားပေးဆပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ထောင်ကျတန်းကျ စွန့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ သစ်ခုတ်သမားတွေ မလိုအပ်တော့ဘူး။ ပန်းပုဆရာတွေ (နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ကျွမ်းကျင်သူ) တွေ လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီလို့ ပြောဆိုခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာကျတော့ သူတို့အတွက် ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်က ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။ ဒီလိုပြောတော့ ယနေ့တိုင် စိတ်ဒဏ်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေကြရသူတွေအဖို့ အသိအမှတ်ပြုမှုမျှ သာမက ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အကူအညီတွေ လိုအပ်နေခဲ့တာလည်း အထင်အရှားပါ။
ဒီလိုဆိုရင် ပြည်တွင်းစစ်ကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရတဲ့ အောက်ခြေစစ်သားတွေ၊ သူပုန်စစ်သားတွေ အတွက်လည်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ အခြား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး လိုအပ်ချက်တွေက အများအပြား ရှိနေကြ ပါသေးတယ်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်၌က ပြန်လည် တည်ဆောက်၊ ထူထောင်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့ အချိန်ပါ။ အရင်းအမြစ်က နည်း၊ လုပ်စရာဝန်တာက များတဲ့ အခြေအနေလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးလာစေမှုနဲ့အတူ အသီးအပွင့်တွေကို မျှဝေ ခံစားမှု ရှိစေချင်တာကတော့ ကျနော့် စေတနာပါပဲ။
(အောင်သူငြိမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဆိုင်ရာ သုတေသီတဦး ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရှိ NIDA တက္ကသိုလ်တွင် Ph.D. ဘွဲ့အတွက် ကျမ်းပြုနေသည်)
11:01 AM Htet Aung Kyaw No comments
နိုင်သက်လွင်အား ပါတီကိုအသိမပေးဘဲ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး ခန့်အပ်သည့်အပေါ် မွန်အမျိုးသားပါတီမှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မည်
မွန်အမျိုးသားပါတီမှ နိုင်သက်လွင်အား အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့မှုအပေါ် မွန်အမျိုးသားပါတီမှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရန် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လာမည့် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် မွန်အမျိုးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းဝေးအပြီးတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေဖြင့် ပါတီဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တာဝန်ပေး ရွေးချယ်သည့်အခါတွင် ပါတီကို ဦးစွာ ကမ်းလှမ်းဆွေးနွေး သင့်သော်လည်း ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အပေါ် မွန်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ကသိကအောက် ဖြစ်ရုံကလွဲ၍ နိုင်သက်လွင်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်စရာ အကြောင်းမရှိကြောင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်လယိတမ က The Ladies သို့ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တစ်ဖွဲ့လုံးအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့သဘောထား ထုတ်ပြန်ရမှာပါ နိုင်သက်လွင် အတွက်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်သက်လွင်ကို ပါတီက ထုတ်ပယ်ဖို့မရှိဘူး” ဟုလည်း နိုင်လယိတမက ပြောသည်။
မွန်အမျိုးသား ပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလတွင် လွှတ်တော်အတွင်း ရောက်ပါက အတိုက်အခံပါတီ အဖြစ်သာ ရပ်တည်မည်ဟု ကြေညာထားခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ မွန်အမျိုးသားပါတီအတွက် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် အရေးပါသည့် နိုင်သစ်လွင်အား အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့မှုမှာ ပါတီစည်းမျဉ်းအရ ကြည့်ပါက နုတ်ထွက်ခိုင်းသည်အထိ လုပ်နိုင်သော်လည်း ယင်းသို့ ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲဖွယ်ရှိနေသဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မွန်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအချို့က သုံးသပ်သည်။
“အခုအနေထားက မွန်အမျိုးသားပါတီအတွက် ခက်ခဲနေတယ်။ ပါတီမှာ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်ယူခဲ့ရင်ဆိုပြီး မူဝါဒက ချထားတာ မရှိဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အတိုက်အခံ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားသေးတယ်။ အဲဒီတော့ အစည်းဝေးထိုင်ပြီး အကုန်လုံးကို ခြုံငုံပြီး ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်မယ်ထင်တယ်’ ဟု သံလွင်တိုင်မ်း ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုမင်းလတ်က သုံးသပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ အနေဖြင့် ၄င်း၏ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တခြားနိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ပါတီအလိုက် ကမ်းလှမ်းခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အစရှိသော ပါတီများတွင် ပါတီတာဝန်ရှိသူ အချင်းချင်း ရာထူးလက်ခံသူနှင့် လက်မခံသူများအကြား ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဆိုလျှင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၆ ဦးကို ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
မွန်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရန် ရှိနေသော်လည်း အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရကိုမူ အတိုက်အခံ လုပ်မည် မဟုတ်ဘဲ သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အစိုးရကိုလည်း ကြိုဆိုကြောင်း ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်လယိတမက ပြောသည်။
စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအစိုးရ ဟုတ်ရဲ့လား
ဆောင်းပါးရှင် - စိုင်းထွန်းအောင်လွင် Sai Lwin
မတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၆
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဦးဆောင်မဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ စာရင်းတွေအခုဆိုရင် အကုန်လုံး ထွက်ပြီးလို့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ သူတွေပါ အတည်ပြုလို့ ပြီးကုန်ပါပြီ။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအရပ်သားအစိုးရ တရပ်ပေါ်ပေါက် လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူထုအနေနဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာအမျိုး သား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်တဲ့ အစိုးရဖြစ်မယ်လို့ ရွေးကောက် ပွဲပြီးစ ကာလကတည်းက ကတိပေးထားခဲ့သလို အခုဆိုရင်တော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် အရောင် အသွေး စုံလင် တယ်လို့ ယူဆစရာရှိတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ တရပ် လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ။
သို့သော်ငြားလည်းလက်ရှိအချိန်အထိအခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာ တကယ်လည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုဦးတည်စေမဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သံသယ ရှိစရာကောင်း နေဆဲ ပါပဲ။
တကယ်ပဲအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုဦးတည်တယ်ဆိုရင်အင်အားစုပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလောက်ဆိုရင်ပွတ်တိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ခရီးတစ်ခုကိုအတူတကွ သွားကြဖို့အသင့်ဖြစ်နေ ရမှာပါ။
အခုရက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် တွေက NLD အစိုးရက ကော်မရှင် ဥက္ကဌရာထူးတွေပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတာကိုလက်မခံတာ၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အဖွဲ့ ၀န်ကြီး တချို့ ကိုNLD ကကမ်း လှမ်း ခဲ့ပေ မဲ့လက်မခံတာ ၊ NLDရဲ့ သက်တမ်းရှည် မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ SNLD သျှမ်းတိုင်း ရင်းသားပါတီက NLDအစိုးရမှာ ဘာရာထူးမှ မယူတော့တာ ကစလို့ သျှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် သျှမ်းပါတီ ကိုပေးဖို့ တောင်း ဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာ၊ တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ က အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင် NLD ကိုယ်စား လှယ်အချို့ကိုကန့်ကွက်မှုတွေ လုပ်လာတာ ၊ ရခိုင်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပါတီ ကို ရခိုင် အစိုးရဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်အတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လာတာ ၊ ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် NLDပါတီဝင်ဦးညီပုကိုရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်တော်မှာ အမည်တင်သွင်းတဲ့နေ့မှာပဲ ရခိုင်ပါတီ ANP ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြတာတွေကို ကြည်ရင်ပဲအဓိကကျ တဲ့ အင်အားစု တွေအကြား ဆက်ဆံရေးအေးခဲ မှုတွေကို မြင်နေရသလိုအခုဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရကလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုအမှန်တကယ် ထင်ဟပ်တဲ့အစိုးရ ဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာသံသယ ၀င်စရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်NLDဖွဲ့လိုက်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့တပ်မတော်နဲ့ အစေးမကပ် သူတွေများ နေတာ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေမှာ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့အုပ်စုတွေ များနေတာ စတဲ့ကိစ္စတွေ လည်း ရှိနေတာပါ။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးအစ်ရှူး လေးခုကိုအခြေခံစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီအရေး ၊တိုင်းရင်းသား တန်းတူအရေး၊ အရပ်ဘက် စစ်ဘက်ဆက် ဆံရေး ပြသနာ ၊ ကာလရှည်လူမှုစီးပွားဘဝ နိမ့်ကျမှု ပြသနာစတဲ့ အချက်ေ တွ အပေါ်မူ တည်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရှိ ပကတိ အနေထားအရဆိုရင် အခုဖွဲ့မဲ့အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ် ရေး ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ဘက်ကလွတ်လပ်စွာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရှိဖို့ လိုသ လို ၊ စစ် အုပ်စုကလာသူတွေဘက်ကတွက်ရင်လည်းဦးရွှေမန်း ၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဦးအောင် သောင်း ရဲ့ အဆွယ်အပွားတွေလောက်နဲ့တင်မလုံလောက်ပဲ ဦးသိန်းစိန် ၊ တပ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်တို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ ပါဖို့လိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းပြကောင်းရုံ သက်သက် တိုင်းရင်းသားတွေ မဟုတ်ပဲ တကယ် တိုင်း ရင်းသားအင်အားစုပေါင်းစုံကို သြဇာရှိ လွှမ်းခြုံတဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါဖို့ လိုအပ် နေတာ ကပကတိအရှိတရားပါ။
အခုလတ်တလောအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုကြည့် မယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အရှိတရားလိုအပ်မှုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားပြန် လည် သင့်မြတ်ရေးအစိုးရ ဆို တာနဲ့ အများကြီးလွဲချော် နေတာတွေ့ရပါ တယ်။ တိုင်းရင်းသားပါဝင်မှုများပေမဲ့ လူရိုသေရှင်ရိုသေတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးသမား ဆိုလို့ ဦးအေးသာအောင် တယောက်သာ လွှတ်တော်မှာ ဒုတိယဥက္ကဌနေရာအဖြစ် ရယူထားနိုင်တာ တွေ့ရသလိုဒုတိယသမ္မတနေရာ ရယူထားနိုင်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတဦးပါဝင်နေပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား အများစု အပေါ် လွှမ်းခြုံမှု ရှိသူ ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးစွမ်းစွမ်း တမံဆောင် ရွက်ခဲ့သူ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ပြီးတော့ဦးအောင်သောင်းနဲ့ နီးစပ်သူဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖြစ်တာတစ်ခု လောက်ပဲ သူ့အတွက် အားသာချက် ရှိနေ ပါတယ်။ OTS ဆင့် တပ်မတော် အရာရှိ ဟောင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ကိုခန့်လိုက်လို့ တပ်မတော်နဲ့အဆင်ပြေသလားဆိုတော့ လည်းအဆင် မပြေပြန်ပါဘူး။
သူ့ကိုခန့်မယ်ဆိုကတည်းကတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တာအားလုံးအသိပါပဲ။ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးအထိပေးတာရှိပေမဲ့ အကုန်လုံးက အန်အယ် လ်ဒီ ပါတီဝင်ေ တွကြီး ကြီး ပါ။ ဒါကြောင့်လဲရခိုင် ၊သျှမ်းမှာလို NLD ပါတီမနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ မှာ ပြ သနာ အချို့ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းနဲ့ စိန်ခေါ်မှုအချို့ ကြုံတွေ့လာရခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
NLDရဲ့ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကဘယ်လောက်အထိလွဲချော်ခဲ့သလဲဆိုရင် တသက်လုံးနီးကပ် ခဲ့တဲ့ တိုင်း ရင်း သား မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး ဦးဆောင်တဲ့ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် က လူတွေတောင် NLDအစိုးရမှာဘာနေရာမှ မယူတော့ပဲရှောင်ထွက် ခဲ့တာကြည့်ရင် တစ်ခုခုမှား နေတယ် ဆိုတာ သေချာစေခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ လိုဒီမိုကရေစီအုပ်စု တွေ ကလည်းငြင်းဆန် ဦးအောင်မင်း ၊ ဦးဝင်းရှိန် တို့လို သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တွေ ကလည်း ငြင်းဆန် ဆိုတဲ့အနေထားက တစ်ခုခုမှား ယွင်းနေတာကအသေချာပါပဲ။
၈၈ မျိုးဆက် ကိစ္စကိုစကြည့်ရအောင်ပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် အချို့ကိုNLD အစိုးရ ကဖွဲ့စည်းမဲ့ လူ့အခွင့်ရေး လိုကော်မရှင်တွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး ၈၈ အဖွဲ့က ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ ၈၈ အဖွဲ့အနေနဲ့ ကမ်းလှမ်းတာမဟုတ် ပဲကိုမင်းကိုနိုင် တယောက်တည်း ကိုပဲကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်သာအဲဒီရာထူးကိုအဖွဲ့နဲ့ မတိုင်ပင်ပဲသူ့သဘောနဲ့ သူသာသွားယူ လိုက် ရင် အဖွဲ့ပါ နှစ်ခြမ်းသုံးခြမ်းကွဲသွားနိုင်တဲ့ အခြေနေမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်အများစု အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာNLDအစိုးရကို ၀န်းရံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြို ကာလကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွေမှာ ၈၈ အဖွဲ့တွေကိုတပြုံ တစ်ခေါင်းလုံး NLD ဘက်က ချန်လှန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၈၈ နဲ့ NLDအကြား ဆက်ဆံရေး ကကောင်းမွန်လှတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကချန်လှန်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုကိုကြီးဆိုရင် ပါတီအ သစ်ေ ထာင်မယ် လို့ အတိ အလင်းကြေငြာထားခဲ့တာပါ။
ဒီလိုအနေထားမှာကိုမင်းကိုနိုင်တဦးတည်းကိုကွက်ပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့ တာဟာရိုးဖြောင့်ပါရဲ့ လား။ တဘက် အဖွဲ့စည်းကိုဆက်တက်မလာအောင် လုပ်တာလားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေပဲသိပါလိမ့်မယ်။
လတ်တလောရခိုင်ပါတီကိုကြည့်ရင်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ ဦးအေးသာေ အာင် ကို ဆွဲထုတ်ပြီး လွှတ် တော်မှာနေရာပေးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့ ပါ တယ်။ ဦးအေးသာအောင်က လည်းပါတီနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင် ပင်ခြင်း မရှိတာေ ကြာင့် ပါတီကွဲရမဲ့ အခြေနေရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ ရခိုင်ပါတီရဲ့ တာဝန်ရှိ သူအများစုက ပြည်နယ်အစိုးရရရှိရေးဆိုတာသူတို့ရဲ့ အဓိက ပဓာနကျတဲ့ ပန်းတိုင်ပါပဲ။ မွန်ပါတီက တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရတဲ့နိုင်သက်လွင်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ ရာထူးကို ပါတီချင်းကမ်း လှမ်း ခဲ့ တာမဟုတ်ပဲတစ်ဦးချင်းစီအလိုက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။
နိုင်သက်လွင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ မိကွန်ချမ်းဟာ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်တာကြောင့် လည်း နိုင်သက်လွင် ဟာပါတီကိုညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ခြင်း မရှိပဲ NLDနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါ တယ်။ နိုင်သက်လွင် ကို ခန့်ခဲ့ပေမဲ့ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ရာမှာတော့ NLDပါတီ ၀င်ကိုပဲ ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ အပြင် အဲဒီပါတီဝင်ကလည်း ဗမာဖြစ်နေတာ သွားတွေ့ရ ပါတယ်။
သျှမ်းပါတီဖြစ်တဲ့ SNLD ဆိုရင် အစောပိုင်းတုန်းကဒုတိယသမ္မတနေရာအထိ နာမည်ထွက် ခဲ့ပါတယ်။ ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွှန့်လွင်အနေနဲ့ NLDရဲ့ ဆင့်ခေါ်ချက်အရ ဒုသမ္မတလောင်း ရွေးချယ်မဲ့ နေ့ မတိုင်မှီ နေပြည်ေ တာ် ကို အရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ သမ္မတလောင်းစာရင်းနာမည်ထွက်သူ တွေထဲမှာ စိုင်းညွှန့်လွင် ဟာ နိုင်ငံရေးအရ သြဇာရှိသူတဦးဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး အသိုင်း ဝိုင်း သာမက ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအသိုင်း အဝိုင်းကပါ လေးစားရ သူတဦးလည်း ဖြစ်ပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါမရတော့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုပြီးကမ်းလှမ်းပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းပါတီ အလိုက်ဆွေးနွေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာဆွဲ ထုတ်ခေါ်တဲ့သဘောပါ။
ဒီအတိုင်းဆိုရင် ပါတီအလိုက်သင့်မြတ်ရေးမဟုတ်ပဲ NLDရဲ့ အောက်မှသာ သွားရ မဲ့ အနေထားဖြစ်နေတဲ့ အတွက် SNLD ပါတီအနေနဲ့ လက်မခံေ တာ့ပါဘူး။
သူတို့တကယ်လိုလားခဲ့တာကတော့ ပြည်တွင်း စစ်ဒဏ်ကြောင့် အလူးအလဲဖြစ်နေတဲ့ သျှမ်းပြည်နယ်အတွက် သျှမ်းဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ NLDကမပေးနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးမှာသူတို့အနေနဲ့ NLD ကိုအတိုက် အခံမလုပ်ပဲ ပြည်နယ်အစိုးရမှာရာထူးမယူဖို့ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အခု သျှမ်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ခန့်လိုက်တော့လည်းအစဉ်အလာမရှိတဲ့ ဗမာတယောက်ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သျှမ်းတွေကိုဘယ်သူ့ကျွန်မှ မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ စကား ကိုပျက်ရယ်ပြုနေ သလိုပါပဲ။ တကယ်လို့ SNLD သာလက်ခံလိုက်ရင်လည်း နိုင်ငံရေး အရသဘောတူညီမှု မရှိပဲလက်ခံတာဖြစ် တဲ့အတွက် ချောင်ထိုးထားလိုက်ရင် သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရတဖြည်းဖြည်းကျရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ NLDကလက်ခံထားတဲ့ တဦးတည်းသော ၈၈ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ကိုပြုံးချိုကိုပဲ ကြည့်ပါ။
အခုထိလွှတ်တော်မှာဘာနေရာမှ ဟုတ်တိပတ်တိမရသလိုအသံလည်းထွက်မလာ တော့ပါဘူး။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြိးတွေနဲ့အလုပ်အဖွဲ့တွေကိုကမ်းလှမ်း ခဲ့တာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ NLD ကသူ့အစိုးရမှာပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပေမဲ့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆွေးနွေးတာမျိုး မဟုတ်ပဲ တယောက်ချင်းစီ ဆွဲခေါ်တဲ့အနေထားပါ။
သဘောကနိုင်ငံရေးအရသဘောတူညီမှုနဲ့ မဟုတ်ပဲဆွဲ ထုတ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခန့် မသင့်ရင် တဘက်အဖွဲ့အတွက် အင်အားပါ ပိုမိုယုတ်လျော့ စေပါလိမ့်ဦးမယ်၊ ဒါကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးအချို့အနေနဲ့ ငြင်းဆန်ခဲ့ တယ်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ နဲ့နီးစပ်သူ တွေက စာရေးသူကိုပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့သာ အဆင်ပြေ ခဲ့မယ်ဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုတပ်မတော်ကလေးစားတဲ့ အတွက် လတ်တလော ကာလမှာ တပ်က ကပျက်ကယက် လုပ်သလို ကိစ္စတွေကလုပ်ချင်မှ လုပ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။
သူရဦးအောင်ကို ဦးသိန်းဆွေတို့ဟာ NLDအစိုးရအဖွဲ့ထဲရောက်နေပေမဲ့ NLDနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ထိပ်တန်းခေါင်း ဆောင်တွေ အကြားနိုင်ငံရေးအရသဘောတူလို့ ရောက်နေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ NLDအနေနဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ခြင်း လည်းမရှိပါဘူး။သူတို့ဟာသူရဦးရွှေမန်းရဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုသေချာပြန်ကြည့်မယ် ဦးရွှေမန်း ၊ ဦးအောင်သောင်း တို့ရဲ့ လူတွေသာများနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပြေလည်လို့ တပ်နဲ့ ပြေလည်မလားဆိုတာ ကလည်း မသေချာပါဘူး။ တပ်က မျက်စိစပါးမွှေးဆူးသူတွေထဲ သူတို့အုပ်စုထိပ်ဆုံးကပါနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ တပ်ပေါင်းစု မူဝါဒနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ နမူနာ ယူစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားတို့ဟာ အမျိုးသားခေါင်းေ ဆာင်တွေဖြစ်သလို ပါတီအ လိုက်အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဖြစ်စေ မျိုးနွယ် စုတွေအကြား ယုံကြည်မှုနဲ့ သင့်မြတ်ရေး တည်ဆောက် ခဲ့ရာမှာလည်း ငါကအားသာတယ်၊ လူထုထောက်ခံမှုများတယ်ဆိုပြီးခွဲခြားမှု တွေ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အား လုံး ပါဝင်ရေး အတွက် သဘောထားကြီးကြီး နဲ့ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။
အတိုက်အခံအချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့သော် လည်းေ ကာင်း နိုင်ငံရေးအရ အကျေအလည်ဆွေးနွေးပြီးမှသာတဘက် အင်အားကြီး တဲ့ သူတွေနဲ့ သွားရင်ဆိုင်တာပါ။ ဘဝတူ တွေအချင်းချင်းကြားမှာလည်း ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိအောင် နေခဲ့တာလည်း သမိုင်း အထောက်ထား တွေအရ အရှင်းသားတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်တပ်ကို ချမနင်းပါဘူး။ သွားရောက်ရင် ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပြိုင်ဘက် ရန်သူလို့ ဆိုနိုင်သူကိုေ လးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် ရန်သူတွေကပါ လေးစား ရသူတွေဖြစ် ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကခေါင်းဆောင် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားရဲ့ အမျိုး သားပြန် လည်သင့်မြတ်ရေးအစိုးရမှာဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ အငြိုးအာ ဃာတတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့ ယခင် အာဏာရှင် လူဖြူတွေအပါဝင် ပါတီပေါင်း ၂၆ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
အခုကြုံနေရတဲ့ အခြေနေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား အချင်းချင်းကြား ထဲမှာတောင် ယုံကြည်မှုကောင်းကောင်း မတည်ဆောက် နိုင်သလို ၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဆိုသူနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အကြားမှာ လည်း ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ထား သလဲဆိုတာ က မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေပါတယ်။
အခုဆိုရင်ပဲ ဗမာခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမြင်မကျယ်မှုကြောင့် လူထု အကြား မှာ ဥပမအားဖြင့် ( ရခိုင် နဲ့ ဗမာ ) ( သျှမ်းနဲ့ ဗမာ) စသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ကွဲလွဲ မှုကတဆင့် စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အခြားအုပ်စုကွဲတွေဖြစ်ေ န တာ မျိုးနွယ်စုတွေအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှု တွေဖြစ်နေတာ ဟာ ကောင်း တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြင်မတူကွဲလွဲတာကို လက်ခံ ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ ဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မိမိနယ်မြေ မိမိအုပ် ချုပ်ခွင့်ကို တောင်းဆို နေတာဟာ သူတို့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီး တနည်းအားဖြင့် အဲဒီအချက်ဟာ ပြည်တွင်းစစ် နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာ မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။
( ဥပမာအားဖြင့် သျှမ်းလိုလက်နက်ကိုင်အင်အားကြီးအဖွဲ့ ရ ဖွဲ့လောက်ရှိ တဲ့ ပြည်နယ်မှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပါတီကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးေ ပးခြင်း အားဖြင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို ပိုပြီး အထောက် ကူ ပြုလာနိုင်စေပါ တယ်။ )
တိုင်းရင်းသားအများစုရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို မရပဲ ကိုယ့်စကားနားေ ထာင်တဲ့ ပါတီဝင်တိုင်းရင်းသား လောက်ကိုသာ အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရုံနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြသနာ မပြေလည်သွားဘူးဆိုတာ သမိုင်းသာဓကေ တွလည်း မြောက်မြားစွာရှိနေခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် အရပ်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးအရ အီလစ်တွေကြားထဲမှာ ( အရပ်ဘက် အီလစ် ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေ အကြား ဆက်ဆံရေး ) ကလည်း ချောမွေ့နေ တယ် လို့ မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပြောင်းေ ရးဖြစ်စဉ်ဟာ အရေးပါတာမှန်ပေမဲ့ ဒါဟာ အဆင့်တဆင့်သာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အရ ညွှန်းဆိုနေတာက သင့်မြတ်ရေး လို အော်ေ နပေမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အကျိတ် အခဲတွေ ပွတ်တိုက်မှုတွေက တဆင့် ပြသနာတွေ ဖြစ်လာဖို့ တာစူနေတာတွေက မူမရှိပဲသွား နေတဲ့ သင့်မြတ်ရေးဆိုတာကို ညွှန်းဆိုနေပါတယ်။
ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ချနင်းဝံ့သူကို ဘယ်လောက်အထိ ယုံရရမလဲဆိုတာလည်း တပ်ဘက်က လည်း စဉ်းစားနေကောင်း စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ လူထုကို ပျားရည်နဲ့ ၀မ်းချဖို့ဆိုတာကလည်း ရေရှည်မှာတော့ မလွယ်ပါဘူး။
လောလော ဆယ်အခြေနေအရတော့ တပ်မတော် ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုဆိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် သင့်မြတ်ရေးကလည်း လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်နေဆဲပါပဲ။
အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်အားလုံးက တလှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်းသွားလို့ သဘောထားရ မှာဖြစ်သလို လှေကို ဦးဆောင်မဲ့ လှေဦးစီးကလည်း သာတူညီမျှစိတ်ဓါတ် ထားရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တောင် အာဖရိက သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သုတေသန စာတမ်းတွေ စာအုပ်တွေ ရေးသားခဲ့ သူ သတင်းစာဆရာ အလစ္စတာ စပတ်ကတော့ ' တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အရှိန်ရ လာပြီး ယုံကြည်မှုမြင့် တက်လာတာနဲ့အမျှ အဓိကကျတဲ့ ခေါင်းေ ဆာင်နှစ် ဦးဖြစ်တဲ့ မင်ဒဲလားနဲ့ ဒီကလပ်တို့ဟာ သူတို့ဟာ လှေတစီးတည်းအတူတူ ခရီးသွားကြသူတွေဖြစ် တယ်။ ရောက်ရင်လည်း အတူတူရောက် မယ် နှစ်မြှပ် ရင်လည်း အတူတူနှစ်မြှပ်မယ်ဆိုတာ တက်ညီလက်ညီလုပ်ရမယ်ဆိုတာ နှစ် ဘက်စလုံးက နားလည်လက်ခံလာတဲ့အတွက် နိုင်ငံသစ်ကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်' လို့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသစ်မနက်ဖြန် Tomorrow is another country စာအုပ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Credit - Panglong(Burmese)
6:46 AM Htet Aung Kyaw No comments
Criterium International ပွဲစီးနေစဉ် နှလုံးရောဂါနဲ့ဆေးရုံတင်လုိုက်ရသူ Daan Myngheer သေဆုံးသွား...။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ-တနင်္ဂနွေ (ဘလဂျီ့ယံက Gent-Wevelgem ပွဲ၊ ဘာစီလုိုးနားက Catalunya ပွဲတွေနဲ့တချိန်တည်း) က ပြင်သစ်ပုိုင် မြေထဲပင်လယ်ကျွန်း Corsica မှာ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Critérium International ပွဲ ပထမ နေ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၂၅ ကီလုိုအလုိုမှာ သူဟာ Peloton ထဲကနေပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အရေးပေါ် လူနာတင်ယဉ်ပေါ်တင်ပြီး Ajaccio ဆေးရုံဆီ ပုို့ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Daan Myngheer ဟာ Roubaix Lille Métropole အသင်းအတွက် စီးနေသူဖြစ်ပါတယ်။
Myngheer တနလ်ာနေ့ညက ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်း၊ သူရဲ့ vital organs ကုိုလှူဒန်း ခဲ့ကြောင်း Facebook ကနေတဆင့် သူရဲ့အသင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Myngheer သေဆုံးမှုအကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ရတာ အထူးစိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူဟာ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ ၈ မီနစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံမှာ အနား ယူပါတော့ ချန်ပီယံ... ဆုိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Myngheer ရဲ့သေဆုံးမှုဟာ အခု အီစတာဟောလီးဒေးအတွင်း ထွက်လာတဲ့ ဒုတိယ သတင်းဆုိုးဖြစ်ပါတယ်။ Wanty-Groupe Gobert အသင်းမှ Antoine Demoiti ဟာ မနေ့က (လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရိက) ပဲ ပြိုင်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဘလဂျီယံလူငယ်ဟာ မနှစ်ကမှ professional အဖြစ် Team Verandas Willems နဲ့အတူ ၀င်လာသူဖြစ်ပါတယ်။ 2015 Richmond World Championships မှာ U23 Belgian team အသင်းကနေ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စက်ဘီးသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အလေးထားစဉ်းစားဖုို့ အထူးလုိုအပ်လာနေပြီဖြစ် ပါတယ်။ ။
6:43 AM Htet Aung Kyaw No comments
Panglong(Burmese) added2new photos.
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားတို့ဟာ အမျိုးသားခေါင်းေ ဆာင်ေ တွဖြစ်သလို ပါတီအ လိုက်အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဖြစ်စေ မျိုးနွယ် စုတွေအကြား ယုံကြည်မှုနဲ့ သင့်မြတ်ရေး တည်ဆောက် ခဲ့ရာမှာ လည်း ငါကအားသာတယ်၊ လူထုထောက်ခံမှုများ တယ်ဆိုပြီးခွဲခြားမှု တွေ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အား လုံး ပါဝင်ရေး အတွက် သဘောထားကြီးကြီး နဲ့ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ပဲ ဗမာခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမြင်မကျယ်မှုကြောင့် လူထု အကြား မှာ ဥပမအားဖြင့် ( ရခိုင် နဲ့ ဗမာ ) ( သျှမ်းနဲ့ ဗမာ) စသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ကွဲလွဲ မှုကတဆင့် စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အခြားအုပ်စုကွဲေ တွဖြစ်ေ န တာ မျိုးနွယ်စုတွေအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှု တွေဖြစ်နေတာ ဟာ ကောင်း တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြင်မတူကွဲလွဲတာကို လက်ခံ ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ ဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မိမိနယ်မြေ မိမိအုပ် ချုပ်ခွင့်ကို တောင်းဆို နေတာဟာ သူတို့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီး တနည်းအားဖြင့် အဲဒီအချက်ဟာ ပြည်တွင်းစစ် နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာ မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။
9:31 AM Htet Aung Kyaw No comments
(သဘောတူခြင်း မတူခြင်းနှင့်မဆုိုင်... မှတ်တမ်းအနေဖြင့် စုစည်းထားခြင်းသာဖြစ်)။
ဆွေးမျိုးတော်သဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ဟု ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဆို
တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စိုး၏ ခယ်မဖြစ်ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်စိုးမှာ များစွာ နီးကပ်မှုရှိသဖြင့် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်မှာ ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Dawei Watch ၏ မေးမြန်းချက်ကို ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်က အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ သည်။
"အစ်မရဲ့ ဟို… ခဲအိုပဲဆိုပါစို့ ဦးအောင်စိုးက အစ်မတို့မျက်စိရှေ့မှာပဲ အစ်မတို့ အိမ်ထောင်သက်တစ်လျှောက်မှာပဲ နိုင်ငံရေးအတွက် အနစ်နာခံလာတယ်။ ဦးအောင်စိုးကို အစ်မက အားကျတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပက်သက်လို့ ပေးဆပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် အစ်မက အမြဲတမ်းလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုယ့်ဆွေမျိုးထဲမှာ ။ ဒါပေမယ့်လို့ အစ်မ အခုလိုဖြစ်လာတာကတော့ ဦးအောင်စိုးရဲ့ အကူအညီပါလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
ဦအောင်စိုးကို အစ်မကလည်း အစောကြီးထဲက ကြိုပြောထားပါတယ်။ နိုင်ငံေ၇းမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလှုပ်ရှားရအောင်လို့ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ဆိုပြီးတော့ အဲလိုမျိုး။ အစ်မတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ လှုပ်ရှားကြပါတယ်"
ထားဝယ်ဒေသ၊ သရက်ချောင်းမြို့ပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဆေးကုခန်းဖွင့်ထားသော ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်သည် ရန်ကုန်ဇာတိဖြစ်ပြီး အသက် ၅၀ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အနီးကပ်လူယုံတစ်ဦးဖြစ်သည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စိုး၏ ညီဖြစ်သူ ဦးထွန်းမင်းနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သားနှစ်ဦး သမီးနှစ်ဦးရှိသည်။
ဓာတ်ပုံ - Dawei Watch
မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးအတွက် ဦးညီပုကို ရွေးကောက်ခံ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ခန့်အပ်ခဲ့လို့ ရခုိုင်အမျိုးသားပါတီမှ လွှတ်တော်အမတ်များက လွှတ်တော်အစည်းအဝေး မတက်ဘဲ ထွက်ခွာ သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုပဲ မီဒီယာ တစ်ခုက ရှမ်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက်မေးလာတယ် ဖြေလိုက်တာက ရှမ်းနဲ့ရခိုင်က မတူဘူး အခြေနေအနည်းငယ်ကွဲတယ် သမိုင်းတော့ တွင်သွားတာပေါ့လေ ဦးနေ၀င်း ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တောင်ရှမ်းပြည်နယ်အကြီးအကဲက ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပဲ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ ကိုင်တွယ်နိုင်မတွယ်နိုင်ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ သူပုန်များပြီး Mirgration လက်နက်နဲ့ မူးယစ်လို ကုန်သွယ်မှုတွေ များတဲ့နေရာမှာဒေသခံအင်အားစုတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရပဲ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ တစ်ခုတည်းထင်သလို လုပ်မယ်ဆိုရင် စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ကြုံရလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ကြီးချုပ်က သမာသမတ်ကျပြီး အစ်ရှူးတွေနားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ ဖက်ဒရာယ်အရေး တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး ကတိပေးထားပြီး ပင်လုံစာချုပ်အဓိက လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ ပြည်နယ်မှာ ဗမာသွားအုပ်ချုပ်တာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပြောင်းပြန်လို ဖြစ်တာပေါ့ ပြည်ထောင်စုပါတီလို့ ဆိုထားတော့ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ မကြာခင် အဖြေပေါ်မှာပဲ လို့သာ ပြောခဲ့တယ်။
လွှတ်တော်မှာ အနဲစုဖြစ်နေတဲ့အမတ်တွေ အားလုံးရပ်ပြီးကန့်ကွက်တာ
ဘဲဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်ထဲကထွက်သွားပြီးကန့်ကွက်တာဖြစ်ဖြစ် ယင်းသို့ပြုမူ
ခြင်းများသည် သူတို့၏ အခွင့်အရေး သူတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်သာဖြစ်သည်။ ထို
အပြုအမူများ သူတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့် သူတို့၏ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်
သက်၍ ပြစ်တင်၍ မရပေ။ သူတို့၏ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကို လေးစားအသိ
၂။ ANP နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ပြသနာ
၂၀၀၈ ခြေဥအရ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား သမတက ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၎င်း ဥပဒေပုဒ်မအားပြင်ဆင်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား ပြည်နယ်လွှတ်တော်
မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရေး ၎င်းပုဒ်မအားပြင်ဆင်ရေးအား ပထမအ
ကြိမ်ပြည်သူလွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ဘူးသည်။ ထိုစဉ်ကလွှတ်တော်
တွင်အနဲစုဖြစ်သည့် NLD အမတ်များလည်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်
ထိုစဉ်က စစ်တပ်ကိုယ်စားလည်များ ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် ထိုပုဒ်မအား ပြင်ဆင်
ထိုပုဒ်မအားပြင်ဆင်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တင်
မြှောက်ခွင့်ရရေးသည် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့်ပြသနာအဖြစ်
လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာအား ANP
ပါတီကတောင်းဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မူအရကြည့်ရန်လိုသည်။ လက်ရှိရခိုင်
ပြည်နယ်ရှိ ပြည်နယ်အမတ်ရွေးကောက်ရာ ၁၇ မြို့နယ်တွင် ၄ မြို့နယ်တွင်သာ NLD ကအနိုင်ရပြီး ၁၁ မြို့နယ်အနိုင်ရထားသော ANP ပါတီ၏တောင်း ဆို ချက်ကို နားလည်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ANP ပါတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်၏ပြသနာမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း
ပြသနာဖြစ်နိုင်ကောင်းသော်လည်း ANP ပါတီမှ ဝန်ကြီးချုပ်တောင်းဆိုသည့်ပြ
သနာသည် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များဆိုင်ရာ မူပြသနာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်ပြသနာသည် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းရမည့်ပြသ
လက်ရှိ ရှမ်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် NLD မှ အရွေးချယ်ခံရသူမှာ သူ၏
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အချင်းအရ အပစ်ပြောစရာမရှိပေ။ သို့သော် ရှမ်းပြည်နယ်
သည့်အတွက် ဝေဖန်ခြင်း လက်မခံခြင်းရှိသည့်တိုင်းရင်းသားတို့၏ခံစားချက်
တိုင်းရင်းသားတို့တောင်းဆိုနေသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်
ထိလွယ်ရှလွယ်ပြသနာဖြစ်သည်။ အနှစ် ၆၀ ကျော်စစ်ခင်းနေကြသည့်ပြသနာ
ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြသနာကို သိမ်မွေ့စွာ ချဉ်း
မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အစိုးရအာဏာလွှဲပြောင်းရေးသည် အရေးကြီး
နေသည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ရင်ဘတ်ကျယ်သူများက ပို၍ သဘောထားကြီး
ရန်လိုသည်။ အထူးသတိပြုရန်လိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားများနှင့်ပြသနာသည်
စစ်အာဏာရှင်နှင့် ဖြစ်ပွါးသောပြသနာမဟုတ်။ ထို့ပြင် တိုင်းရင်းသားပြသနာ
သည် ပြည်နယ်တခုပြသနာ တိုင်းရင်းသားပါတီတခုပြသနာမဟုတ်ပေ။ ပြည်
မာံလျး ဂိတု added6new photos.
တလမွန် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် မင်းဗညားစန်း ဆိုတာ တရုတ်မ ကိုယူထားတဲ့ စစ်ဘောမ တစ်ကောင်ပဲ ။ အဲဒီတရုတ်မ ကောင်းမှု နဲ့ ပဲ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး စင်ကာပူကို မောင်ခိုပစ္စည်းတွေ မော်လမြိုင် ကတဆင့် စက်လှေတွေ နဲ့တရားမ၀င်ပို့ တယ်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ ၂လုံး၊၃လုံး၊ ဘောလုံးပွဲ အကြီးအကျယ်ဒိုင်ကိုင်တယ်။ အဲဒီ ငွေမဲတွေကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြတယ်။ တလမွန် ကားလိုင်းထောင်တယ်။ ရော်ဘာခြံ လုပ်တယ်။ ထရမ်စဖော်မားပုံးထုတ်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စစ်အစိုးရခေတ် မှာရော အခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ခေတ်မှာရော အာဏာပိုင်တွေ နဲ့ ပေါင်းပြီးလုပ်စားနေတဲ့ ခရိုနီ တစ်ကောင် အဆင့်ထက်မပိုဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်း ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတော့ အဖေလုပ်သူ နိုင်သက်လွင် ကို မွန်အမျိုးသားပါတီမှာ ဒုက္ကဌရာထူးထိရောက်အောင် ပို့ ထားတယ်။ ညီမ လုပ်သူ မိကွန်ချမ်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနားရောက်အောင် ပို့ ပေးတယ်။ ချဲလောင်းကစားကရတဲ့ ပိုက်ဆံကို ရေလိုခင်းပြီး ဒေါ်စုခြံထဲရောက်အောင် လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးမယ့်သူတွေကို ရအောင်ကပ်တယ်။ ပိုက်ဆံပေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး အမြင်နဲ့ ပဲဆိုတော့ မွန်အမျိုးသားပါတီ ဒုက္ကဌသမီးဆိုတဲ့ အသိနဲ့အနားကပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်သက်လွင် နဲ့ မိကွန်ချမ်း တို့ နှစ်ယောက်ကို ရှင်စောပု မွန်အသင်းဆိုပြီး မွန်သွေးပါတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ( ငြိမ်း/ပွင့် ) က ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုမင်းဇေယျ တို့ ဆီကို ၀င်ပူးခိုင်းတယ်။ စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို လှူတန်းတယ်ဆိုတဲ့ အကွက်မျိုးနဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ ကိုပါ အိတ်ထဲ ထည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
အခု ဗညားစန်းရဲ့ ညီမ မိကွန်ချမ်းက ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ အရှက်မရှိ ထပ်တင်လိုက်သေးတယ် ။ မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် သားသမီးတဲ့။ မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘာတွေလုပ်ထားကြလို့ လူမျိုးစုတစ်ခုလုံးရဲ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတာ နာမည်ကို လွယ်လွယ်သုံးလိုက်ကြတာလဲ။ ပြီးတော့ ဘယ်မွန်တွေက ခင်ဗျားတို့ ကို မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် သားသမီးလို့အသိအမှတ်ပြုထားလဲ။ ဗညားစန်းက ခရိုနီတရုတ်မကို ယူထားတယ်။ မိကွန်ချမ်း က အညာသား ဗမာ တစ်ကောင်ကို ယူထားတယ်။ မွန်လူမျိုးရဲ့ သွေးကို တောင် စောင့်ထိန်းမှု မရှိတဲ့ မိသားစုက မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ ထုတ်ပြောရဲတာ နည်းနည်းရှက်တက်ရင် ဒီစကားမျိုးမပြောဘူး။ မဲနိုင်ချင်တော့ NLD ထဲသွားပြီး အခုမှ မွန်တိုင်းရင်းသားအကျိုးသည်ပိုးမယ့် မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်လို့လူကြားကောင်းအောင် လျှောက်ပြောနေတာဟာ တော်ယုံအရှက်နဲ့ တာလောက်တော့ မဖြစ်လောက်ဘူး။
အဲဒီလို မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်လုပ်ပြီး ဗညားစန်း တို့ မိသားစုဟာ စစ်အစိုးရရော အတိုက်အခံရော နှစ်ဖက်စလုံးကို ခြံစည်းရိုးခွထိုင်တဲ့ အကွက်တွေ ခင်းထားကြတယ်။ ညီမ လုပ်တဲ့ မိကွန်ချမ်းက NLD ပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဗညားစန်း လည်း ၀င်ငွေသောက်သောက်လဲ ရနေတဲ့ ချဲ၊ဘော်လုံးပွဲ လုပ်ငန်းတွေကို တပည့်တွေကို လွှဲပြီး ကိုယ်တိုင်က KHG တို့ AGRO MAISON တို့ စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဥက္ကဌရာထူးယူပြီး စစ်တပ်ကကောင်တွေဆီကရတဲ့ လုပ်ကွက်တွေ နဲ့စီးပွားရေးလက်စွမ်းပြတယ်။
အခုနောက်ဆုံးတော့ သေမင်တမန်ရထားလမ်းပြတိုက်ဆိုပြီး သံဖြူဇရပ်မှာ ထပ်လုပ်တာလဲ ဘယ်ကောင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လဲ မေးစရာမလိုဘူး။
အဲဒီဖွင့်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အုန်းမြင့်ကိုယ်တိုင်တက်တယ်။ အုန်းမြင့်လည်း ဗညားစန်း ဆီက ၀န်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင် မွန်တိုင်းမှူးဘ၀ ကတည်းက မျိုးမျိုးမြက်မြက်လေးရထားတော့ သေမင်းတမန်ပြတိုက်ကို အလွန်အကျွံ အမွှန်းတင်တယ်။ နာဂစ်မှာ သေတဲ့ ပြည်သူ တစ်သိန်းခွဲ ထက် သေမင်းတစ်မန် ၇ထားလမ်းဖောက်လို့သေတဲ့ လူ ၈ သောင်းက ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတယ်။ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုပြီး သောက်တလွှဲတွေ ပြောလို့ အုန်းမြင့်လည်း ကောင်းကောင်းအဆဲခံရပါလေရော။
အဲဒီဖွင့်ပွဲနေ့ မှာ ဗညားစန်း ကိုယ်တိုင် အဘအုန်းမြင့် ဘောကို ဘယ်လောက်မ ထားလဲဆိုရင် သံဃာတော် နဲ့ဆိုဖာကုလားထိုင် မှာ ကြမ်းတစ်ပြေးထဲ အတူထိုင်ခိုင်းတဲ့အထိပဲ။ ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်က အုန်းမြင့်ဘေးမှာ ခုန် တစ်လုံးဆွဲထိုင်တယ်။ ဘုန်းကြီးထက် ဖင်တစ်ခြမ်း မြှင့်ချင်သေးတယ်။ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတောင် မွန်စာနဲ့ ကဗျည်းတင်သေးတယ်။ သေမင်တမန်ပြတိုက်မှာ မွန်စာတစ်လုံးမှ မပါလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဝေဖန်မိတော့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာ နားမလည်ဘူးလားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဗညားစန်းက ဖေ့ဘွတ်မှာ ပြန်ပတ်တယ်။ ဒါလား အမျိုးသားရေး။ အဲဒီလို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ်နေတဲ့ ကောင်က ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မှာ ( အဖေ - မွန်အမျိုးသားပါတီ ဒုက္ကဌကို ဘေးမှာထားပြီး ကျနော်တို့ မိသားစု တစ်ခုလုံး အနီကိုပဲ ) မဲပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဒီမိုဖက်တော်သားယောင်ယောင် ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးယောင်ယောင် အကွက်တွေ ရွေ့ နေတာ ရှက်တက်ရင် လဲသေလို့ ရတယ်။
ဒီလို သူတို့ မိသားစု စစ်တပ်ကကောင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လုပ်စားနေတဲ့ အသံတွေ ထွက်မလာအောင် အခု ဟင်္သာမီဒီယာ ဆိုပြီး မွန်ပြည်နယ် မှာ မီဒီယာတစ်ခု ထပ်ထောင်လိုက်သေးတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗညားစန်းတို့ မိကွန်ချမ်းတို့ မောင်နှမတွေဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် သာကူးဆိတ်လစိ မျိုးတွေပဲ ဆိုတာ မွန်တိုင်းရင်းသားအားလုံး သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကို မွန်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အတော်များများက သိပေမယ့် ငွေမျက်နှာတစ်ခုထဲနဲ့ ဒီကောင်တွေကို နေရာပေးဆက်ဆံနေတာ လူမျိုးသိက္ခာကျတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီကောင်တွေ မောင်နှမဘေးမှာ ကပ်မြှောင်လုပ်နေတဲ့အမီးကျက်အမီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား ကောင်တွေက ပိုပြီ ရွံဖို့ ကောင်းတယ်။ ဗညားစန်း တို့ လိုကောင်စားတွေဟာ တိုင်းပြည် နဲ့လူမျိုးကို လူပိန်းကြိုက်နည်းတွေနဲ့ အောက်လုံးပြပြီး အမဲဝိုင်းဖျက်နေတဲ့ ကောင်စားတွေပဲဆိုတာ နှစ်ခါပြန်ထပ်ကြည့်ဖို့ တောင် မလိုပါဘူး။
(Agree on disagree) မြန်မာအများစုနဲ့ မတူတဲ့အမြင်...